कसैलाई पनि प्रयोग गर्न नदिनुस् यी ६ कुरा - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
कसैलाई पनि प्रयोग गर्न नदिनुस् यी ६ कुरा
‘सेयरिङ इज केयरिङ’ धेरै परिस्थितिमा सहि सिद्धान्त हो। तर केही यस्ता वस्तुहरु छन् जुन सेयर नगर्दा नै राम्रो। तपाइको आफ्नो र सहयोग पाउने साथीको स्वास्थ्यमा असर पुग्नसक्ने हुँदा यी ७ कुराहरु आपसमा सेयर नगर्नुस्ः
इयरफोनको एउटा स्पीकर आफ्नो अनि अर्को स्पीकरको साथी कानमा! सुन्दा र गर्दा रोमान्टिक लागेपनि यो पटक्कै सहि कुरा होइन। हामीले कानमा ब्याक्टेरिया जम्मा गरिरहेका हुन्छौ, त्यही कानमा कोचिएको इयरफोन साथीलाइ दिनु भनेको उसको कानमा इन्फेक्सन गराउनु हो। कतिपय अवस्थामा कानको ठूलो रोगको शिकार भइने र साथीलाई पनि संक्रमित गराइने सम्भावना हुन्छ।
लिपिस्टिक, लिप बाम, च्यापिस्टिल
केटीहरुमा लिपिस्टिक अनि केटाहरुमा लिप केअर, क्रिम वा अन्य ओठमा लगाउने क्रिम साटासाट गर्ने प्रवृति हुन्छ। ओठमा सिधै दिलिने हुँदा यसमा ब्याक्टेरिया सल्किनछ। अनि त्यही साधन अर्को व्यक्तिले ओठमा नै प्रयोग गर्नु पटक्कै बुद्धिमानी होइन। यसमबाट मुख सम्बन्धी रोगहरु सर्न सक्छन्।
साथीलाई आफ्मो काँइयो दिन सायद तपाइ पनि चाहनुहुन्न। के थाहा चाँया र अझै जुम्रा नै पो सरिहाल्छ कि। यदि कसैलाइ दिनु छ वा कसैको काँइयो प्रयोग गर्नुछ भने राम्रोसंग सफा गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ।
आफ्नै परिवारका सदस्यसंग त गम्छा सेयर गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने साथीभाइलाई दिन त प्रश्न नै उठ्दैन। गम्छा जस्तो मोइस्चर र पसिना सोस्ने लुगाले छालाको रोग फैलाउन सक्छ।
आफुले नुहाउनु साबुन अरुलाई प्रयोग गर्न नदिनुस्। साबुनले सबै ब्याक्टेरिया मार्दैन। तपाइले प्रयोग गर्ने साबुनमा तपाइको शरीरबाट थुप्रै ब्याक्टेरिया सरेका हुन्छन्। अनि अरुको साबुन आफुले प्रयोग नगर्नुस्।
काजल तथा कस्मेटिक सामान
काजल, मास्कार, फेस पाउडर जस्ता वस्तु अरुको प्रयोग नगर्नुस्। विशेषगरी अझै सैलुन जाँदा मेकअप सम्बन्धि सामान कसरी प्रयोग भइरहेको छ ख्याल राख्नुस्। मेकअप गर्न वा केटाहरु कपाल वा दाह्री काट्न जाँदा उल्टो रोग पालेर आउने नगर्नुस्।
Previousकान्समा ऐश्वर्या बनिन मेर्मेड र एन्जल!
Nextपाँचथरमा २ परिवारका ९ जनाको हत्या, एक बालिका घाइते